GERISS - Nyanzvi Dzemasiraidhi & Hinges
Kaviri Wall Slim Bhokisi Dhirowa System
Ruviri rusvingo tetepa bhokisi dhirowa sisitimu yekushandisa yekicheni & yekugezera makabati. Mhando iyi yemabhiridha ebhodhi dhirowa inoshandisa chinyararire padyo padyo inodzikisira dhirowa nemidziyo yekukiya. Iwe zvakare unogona kushandura kushandisa Push kuvhura yakavanzika dhirowa slide pamwe nepamberi clip. Chinhu chechigadzirwa ichi ndechekudzikisira dhirowa inogona kushandisa zvese dhirowa resimbi nedhirowa remuti. Unogona kusevha mutengo weiyo inventory iwe.
Zvikamu Shanghai Yangli Furniture Material Co., Ltd.
Professional fanicha kugadzirwa kubva 1999.
Stainless simbi mativi mugodhi BBQ hovhoni Turnpit / ...
Tsanangudzo: Chigadzirwa Zita: S ...
Tsanangudzo: Chigadzirwa Zita: ...
Clip-pane kabati hinji yakavanzwa
86mm Kukwirira mudhirowa parutivi pepanhau inotsvedza simbi bhokisi d ...
150mm kukwirira mudhirowa slide mutete inotsvedza kicheni ...
Tsananguro: Type: 150mm iye ...
118mm simbi bhokisi dhirowa inotsvedza yakatetepa dhirowa system
Tsananguro: Type: 118mm ini ...
Chinyararire nyoro padyo kufamba sisitimu yeiri wa ...
Tsananguro: Type: Chinyararire ...
Kaviri Wall Metal Inotsvedza Dhirowa System
Tsananguro: Type: Double w ...
Tsananguro: Type: 48mm tel ...
45mm yakazara chiwedzero nyoro yekuvhara bhora inotakura d ...
Tsananguro: Type: 45mm yakazara ...
45mm zvizere chiwedzerwa telescopic migero hydraulic ...
W45 yakazara extention nyoro yekuvhara bhora inotakura dr ...
Tsananguro: Type: w45 yakazara ...
45mm Yakazara yekuwedzera bayonet gomo dhirowa
45mm Full chiwedzerwa Stainless simbi mudhirowa slid ...
Tsananguro: Type: 45mm Ful ...
Full chiwedzerwa telescopic mugero 45mm bhora bhiza ...
Tsananguro: Type: Yakazara ext ...
37mm Full / katatu wedzera telescopic mugero b ...
Tsananguro: Type: 37mm Ful ...
17mm Imwe yekuwedzera chikamu kukwira telescopic dra ...
Tsananguro: Type: 17mm Chivi ...
Yedu kambani SHANGHAI YANGLI FURNITURE ZVINOKOSHA CO., LTD yakavambwa muna 1999, inotarisana nemidziyo yemidziyo yemidziyo kuvandudza uye kugadzira. Isu parizvino tinoshanda maviri maR & D nzvimbo uye mamiriro ehunyanzvi hwekugadzira zvigadziko muShanghai neZhongshan, dunhu reGuangdong. Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa pasi pemhando mbiri dzinozivikanwa: YANGLI neGeriss. Iwo dhirowa system, Akavharika masiraidhi, Bhora rinotakura masiraidhi, Yakavanzwa hinji, mabato, hinji hinji uye mimwe midziyo yemidziyo yemidziyo, ayo anoshandiswa mufenicha, makabati, mudziyo wemumba uye nhare. Zvigadzirwa zvedu zvakawana mukurumbira pakati penyika dzinopfuura makumi mana pasirese.
Mbudzi / 17/2020
Gumiguru / 16/2020
Zvita / 09/2020